China Infrared ọwara draya factory na-emepụta | Xinfeng
Infrared ọwara draya
Maka ụgwọ ihe ike, anyị kwenyere na ị ga-achọ ebe niile maka ihe ọ bụla nwere ike iti anyị ihe. Anyị nwere ike ikwu na nnọọ n'aka na n'ihi na ndị dị otú ahụ elu-edu na ndị dị otú ahụ udu anyị ndidi kasị ala gburugburu maka Factory kacha mma na-ere China Infrared Screen Printing Ọwara ebu draya, Anyị na-etinye ezi obi na ahụ ike dị ka ndị isi ọrụ. Anyi nwere ndi otu ahia mba ofesi ruru eru nke gụsịrị akwukwo na America. Anyị bụ ndị ọrụ azụmaahịa gị ọzọ.
Factory kacha mma na-ere China Iye Ọwara draya, Screen Printing ebu draya, Ebe ọ bụ na anyị oruru, anyị na-na mma anyị na ngwaahịa na ngwọta na ahịa ọrụ. Anyị enweela ike ịnye gị ọtụtụ igwe eji arụ ọwara mmiri dị elu na asọmpi asọmpi. Anyị nwekwara ike ịmepụta draịva dị iche iche dịka ịlele gị. Anyị na-esi ọnwụ na elu mma na ezi uche price. Ewezuga nke a, anyị na-enye ọrụ ogo kachasị mma. Anyị ji obi ụtọ na-anabata ngwaahia iwu na ndị ahịa n'ụwa nile na-ekwenyere anyị maka ibe mmepe na-eme n'ọdịnihu.
Akpe nke ngwa:
Nke a ebu infrared ọwara draya ọtụtụ-eji ihicha nke ihuenyo ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ, bụ karịsịa adabara solidifying okpomọkụ-set na pụrụ iche ụdị nke na-ebi akwụkwọ ink.This ọwara draya enyere mmepụta nke e biri ebi ngwaahịa na ezi colorfastness, elu mgbanwe na elu gloss
1. ọgụgụ isi okpomọkụ akara usoro, mfe ọrụ, nwere ike ịchịkwa okpomọkụ ndiiche irè.
2.adopt ọkụ na-ekesa na-ekpo ọkụ, chekwaa ike n'ụzọ dị irè.
3.Teflon belt, a nabatara atụmatụ ndị ahịa
4.Far infrared kpo oku anwụrụ bụ karịsịa kwesịrị ekwesị na-ewusi okpomọkụ-set na pụrụ iche ụdị-ebi akwụkwọ ink.
5.Aghachị ngwa ngwa belt na-agbanwe na njikwa ọnọdụ okpomọkụ
Jụrụ ngwa na mmepụta
Oyi ogologo ogologo:
N'ime itinye ogologo:
Ebube eriri obosara:
Ebu belt ihe:
Ihicha ebe size:
infrared kpo oku tube ike / unit
1kw / nkeji
infrared kpo oku tube ibu
infrared kpo oku tube ngụkọta ike
Ebube belt moto
ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ
0.37kw / nkeji
Belt ọsọ ukpụhọde:
Screen Printing Ọwara draya
Anọ post silk ihuenyo ebi akwụkwọ igwe
Automatic iko ihuenyo ebi akwụkwọ igwe akara
Automatic uwe ihuenyo ebi akwụkwọ igwe
Manual t uwe elu ihuenyo ebi akwụkwọ igwe
Silk Screen Printing Machine, Ihuenyo Silk Printing Machine, Silkscreen Printing Machine, Glass Screen Printing Machine, Igwe Mbipụta Igwe, Akpaaka Screen Printing Machine,